गायिका ईन्दिरा जोशीले ‘फिल्मी शैली’मा कोसँग गरिन इन्गेजमेन्ट ? यी हुन हुनेवाला दुलाहा — Sanchar Kendra
गायिका ईन्दिरा जोशीले ‘फिल्मी शैली’मा कोसँग गरिन इन्गेजमेन्ट ? यी हुन हुनेवाला दुलाहा
काठमाडाैं । गएको वर्षको फागुन महिनाको पहिलो हप्ता गायिका ईन्दिरा जोशीले आफ्नो हातमा लगाएको औंठीको फोटो सेयर गर्दै क्याप्सनमा लेखेकी थिइन्, ‘२ वर्षको साथ र आउँदो जीवनका समयको निरन्तरता… अन्तिम श्वाससम्म हामी सँगै हुनेछौं।’
अब त्यो खुल्दुलीको समय सकिएको छ। गायिका ईन्दिरा र फेसन डिजाइनर शरद केडियाबीच ‘इन्गेजमेन्ट’ भएको छ। क्याप्टेन विवेक थापाले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा ​शरदले ईन्दिरालाई औ‌ठी लगाउँदै गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएको हो।
उनीहरुले हेलिकप्टरमा खुम्बु पुगेर इन्गेजमेन्ट गरेका हुन्। सार्वजनिक भिडिओमा कुनै फिल्मको दृश्यजस्तै लाग्ने गरी शरदले ईन्दिरालाई औठी लगाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ। टिकटकमा भिडिओ राख्दै ईन्दिरा र शरदलाई नयाँ उज्वल भविष्यको कामना दिएका छन्।
यसैबीच उता गायिका नेहा कक्कडले उद्योगमा नाम बनाउन निकै संघर्ष गरेकी छन् । तर लामो समयदेखि उनी ट्रोलरको निसानामा परिरहेकी छन् । नेहा र उनका भाइ अक्सर आफ्ना अन्तरंगी गीतका कारण प्रसंशकको निशानामा पर्दछन् ।
नेहाले ‘आँख मारे’, ‘गर्मी’, ‘दिलको करार आया’ जस्ता कयौं हिट गीत दिएकी छन् । तर केही समयदेखि उनका गीत प्रसंशकलाई मन परेको छैन । हालै उनले भाई सोनु र गायक हनी सिंहको साथमा मिलेर ‘कान्टा लगा’ गीत ल्याएकी छन् । गीत फ्यानले रुचाएनन् । हालै उनले केही तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेकी छन् । जसको कारण उनी ट्रोलको निसानामा परिन् ।
तस्बिरमा उनले शिमरी गुलाबी करसेटका साथ हरियो स्कर्ट लगाएकी छन् । जसमा उनले दुक्स ब्लान्ड बनाएकी छन् । नेहा यो फेसन सेन्स कारणले ट्रोलको निशानामा परिरहेकी छन् । नेहाले जु स्टाइल बनाएकी छन् । त्यो स्टाइल हलिउडमा आफ्नो गीत सार्वजनिक गर्ने बेला प्रायः गायिकाले बनाउने गर्दछन् । नेहाले लुक्स कपी गरेको कारण उनी ट्रोलको निशानामा परेकी हुन् । उनको यो लुक्सलाई थुप्रैले कमेन्ट गरेका मजाक उडाएका छन् । ती मध्ये एकले लेखेका छन् ‘दिदी बनिन् शकिरा, भइन् फकिरा ।’
गीत-सङ्गीत सँग सम्बन्धित
बाहिरियो नायिका साम्राज्ञीको यस्तो भिडियो, मच्चियो हंगामा, हेर्नुहोस भिडियोसहित
भारतीय अभिनेता अनुपमले ३७ वर्षपछि काठमाडौंमा भेटेकी युवती को हुन् ? किन बने भावुक ?
आमा बनिन् अभिनेत्री नेहा धुपिया
यति ठुलो काण्डमा मुछिए अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन, के भन्छन र शाहरुख प्रहरी ?
जनताका लागि आफ्नै दल र विपक्षीविरूद्ध उभिएका मुख्यमन्त्रीको कथा, हेर्नुहोस् भिडियोसहित
गायिका इन्दिरा जोशीका हुनेवाला श्रीमान् शरद केडिया को हुन ? २ वर्षअघि यसरी भएको थियो भेट ?
केबीसी १३ मा प्रतियोगीले अमिताभसँग गरिन् ‘फ्लर्ट’, अभिनेताले भने, ‘बन्द गरिदिनुस् शो’